မနေ့ က(၀၇၊ ၀၇ ၊ ၀၇)
ထိုင်း မြန်မာနယ်စပ် တနေရာမှာ ဆဲဗင်းဂျုလိုင် အမှတ်တရ နေ့ ကျင်းပပါတယ်။အဲဒီမှာ ၆၂ ခုနှစ် ဇူလိုင် အဖြစ်အပျက်မှာ ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့ အခု လက်ရှိ ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး(KNU) မှာ တာဝန် ထမ်းဆောင်နေတဲ့ အထွေထွေအတွင်းရေးမှုး ပဒိုမန်းရှာ နဲ့ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှုး(၂) စောဒေးဗစ်တာကပေါ တို့ တက်ရောက်လာတာတွေ့ ရသလို ၇၄ ၊ ၇၅ ၊ ၇၆ မျိုးဆက် တွေကိုလည်း စုံစုံညီညီ တက်ရောက်လာတာကို တွေ့ရပါ တယ်။ ၈၈ မျိုး ဆက်တွေကနေ ၉၆၊ ၂၀၀၀ နောက် ဒီကနေ့ မျိုးဆက် သစ်ကလေးတွေအထိ စုံစုံလင်လင်ကိုတွေ့ရ ပါတယ်။
အသီးသီးက ပြန်ပြောင်းပြောကြတဲ့အထဲမှာ …….
အခမ်းအနားကျင်းပရေး ကော်မတီနှင့် မျိုးဆက်အဆင့်ဆင့်
၆၂ ခုနှစ် ဆဲဗင်းဂျုလိုင်က စပြီး၆၃ ခုနှစ်ထိဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းသား တိုက်ပွဲတွေ ဟာ တော် တော့်ကိုပြင်းထန်တဲ့ တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်။ဒါ ၆၂ ခုနှစ်မတ်လ အာဏာသိမ်းမှု အပြီးမှာ ကျနော်တို့ ကျောင်းသားတွေဟာ ဒီစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကို ကျနော်တို့လက်မခံနိုင်ဘူး။ ဒီမိုကရေစီဆိတ်သုဉ်းပြီးတော့ အမှောင်ဖုံးတဲ့ ခေတ်တခေတ်လုံးကိုထူထောင်မဲ့ စစ်အာဏာရှင်ရဲ့ ရည်မှန်းချက်ကို ကျနော်တို့ လက်မခံနိုင် ဘူး။နောက်ပြီးတော့ ကျောင်းကောင်စီကိုဖျက်သိမ်းပြီးတော့ သူတို့ကအာဏာရှင်ကြီးစိုးမှုကို ကျောင်းဝင်းထဲမှာ လာပြီးဖြန့်ဝေတဲ့ကိစ္စကို ကျနော်တို့က လက်မခံနိုင်လို့ ဆဲဗင်းဂျုလိုင် ဖြစ်ခဲ့တာ ဖြစ်တယ်... လို့ ပဒိုမန်းရှာကပြောပြသွားခဲ့တယ်။
၇၆ မှိုင်းရာပြည့်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုအောင်စောဦးကတော့……..
ကျနော်တို့ တကသအဆောက်အဦးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျနော်တို့မျိုးဆက်တွေရဲ့(၆၂ ကျောင်းသားတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့ မုံရွာကိုတင်ရွှေကြီးတို့ ကိုလှရွှေတို့အပါအ၀င်) သဘောထားကို အဲဒီဖက်မျိုးဆက်တွေကို ကျနော်ကမ်းချင်တယ်၊ ဒီမိုကရေစီရလို့ တိုင်းပြည်လွတ်လပ် ပြီဆိုရင် အဲဒီတကသအဆောက်အဦးနေရာမှာ မူလသမဂ္ဂအဆောက်အဦးအတိုင်းပဲ ပြန်လည် တည်ဆောက်မယ်ဆိုတဲ့ သဘောထား ကျနော်တို့ မှာရှိပါတယ်။ ကျောင်းသားထုတွေရဲ့ သမိုင်း ပြတိုက်အဖြစ်အနေနဲ့ထားဖို့ ကျနော်တို့ သဘောထားရှိပါတယ်။ နောက်အသစ် တည်ဆောက်မဲ့ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ အဆောက်အဦးအသစ်ကိုတော့ အသစ်ပေါ်ပေါက်လာမဲ့ နောက်မျိုးဆက်သစ် ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ခေါင်းဆောင်တွေ စိတ်ကြိုက်နေရာမှာ စိတ်ကြိုက်ပုံစံနဲ့ တည်ဆောက် ကြပါ။ တချက်တော့ မှာချင်ပါတယ်။ အဲဒီလိုတည်ဆောက်တဲ့ နေရာမှာ ဘယ်စစ်အာဏာရှင် တကောင်တမြီးရဲ့ လက်နဲ့မှ အုတ်မြစ်ချခွင့်မပေးနိုင်ပါဘူး ဆိုတဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျကို မျိုးဆက်သစ်တွေကို ပေးခဲ့ချင်ပါတယ်…… တဲ့။
၈၈မျိုးဆက်ဖြစ်သူ ကျောင်းသားတပ်မတော်ဥက္ကဌ ရဲဘော်သံခဲကတော့…….
ဒီခေတ် ကျနော်တို့ သမိုင်းတွေဟာ ဒီစနစ်ကြီးအောက်မှာ ကျနော်တို့ အများကြီး ဒုက္ခရောက် ခဲ့ကြရပါတယ်။ ဒီစနစ်ကြီးထဲမှာပဲ ကျနော်တို့ ကြီးပြင်းခဲ့ပါတယ်။ ဒီစနစ်ကြီးကို ကျနော်တို့ ပုန်ကန်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ ဒီစနစ်ကြီးကိုက ကျနော်တို့ကို ပုန်ကန်ဖို့မွေးဖွား ခဲ့တယ်လို့ ကျနော် ယူဆပါတယ်။ ကျနော်တို့ ရဲ့ တာဝန်ဟာ သူပုန်ဖြစ်ဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူပုန်ထဖို့ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်... တဲ့။ သူပြောတာလဲ ဟုတ်ပါတယ်နော်။ ဒီနေ့ ဘလော့လောကရဲ့ ဘလော့ဂါတွေထဲမှာတော့ သူပုန်လေးတွေ အများကြီး တွေ့နေပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
အထက်ပါ မျိုးဆက်တွေရဲ့ စကားတွေကို နားမထောင်လိုက်ရတဲ့သူတွေအတွက် လက်ဆင့်ကမ်းလိုက်ပါတယ်။
Posted by ခင်မင်းဇော် at 12:52 PM
ကေပြောတာနဲ့ပဲ သူပုန်ခေါင်းဆောင်ကြီး ဖြစ်နေပါပေါ့လား။
ဒီနေ့လို ခေတ်ကြီးမှာ သူပုန်ဖြစ်ရတာ ဂုဏ်ယူစရာမဟုတ်လား။
ခေတ်ကြီးကိုက ပုန်ကန်ဖို့ မွေးဖွားခဲ့ကြတာပါတဲ့။